PressReader - Kwayedza: 2017-10-13 - VANA VECHIKO . . . vachironga ‘hurumende’ yavo
VANA VECHIKO . . . vachironga ‘hurumende’ yavo
VANA vechikoro vari pakati pe56 ne72 — vakomana nevasikana — vepachikoro cheMuchapondwa Primary School chiri kwaMusana, kuBindura, vanga vachigara musango riri mugomo kubvira pakavhurwa zvikoro kutanga kwetemu ino munaGunyana kusvika svondo rapera umo vanonzi vaironga “hurumende” yavo yekuzorwisa vadzidzisi vavo avo vavanoti vanovashungurudza.
Vana ava — kubva veGrade 3 kusvika 7 — vanonzi vaibva kudzimba dzavo vachiti vari kuenda kuchikoro apo vainogara mugomo reMahori, iro riri padyo nechikoro ichi uye rinonzi rinoyera.
Kusvika pazozivikanwa nyaya iyi svondo rapera, vana ava vanonzi vange vapanana zvigaro zveyavanoti “hurumende” yavo zvinosanganisira mutungamiriri, mutevedzeri wake nemakurukota acho.
Mashoko anobva munharaunda nekune vamwe vana vepachikoro ichi anoti vana ava vakatora zvirauro kudzimba dzevabereki vavo, izvo vange vachishandisa kubatisa hove murwizi Karoi rwuri munzvimbo iyoyi.
Hove dzavairaura vanonzi ndidzo dzavaidya vari mugomo umu.
Mumwe mukomana ari muGrade 6 pachikoro ichi — uyo watisingakwanise kudura nezita nekuda kwezera rake — anoti akatombokokwa nevamwe vechikwata ichi kuti vanogara vose musango vachidya hove asi iye ndokuramba.
“Ini ndakatombofurirwawo kuti ndijoinhe chikwata ichi asi ndikazviramba. Zvainzi taizopota tichibva kumba tonanga kumakomo uko taifanirwa kunoswera, hapana aizouya kuchikoro.
“Kunesu vakaramba, takavhundutsirwa tichinzi pavanozodzoka musango umu vachauya vachitirwisa pamwe chete nevadzidzisi vedu.
“Izvo zvekuiti vakaronga nyaya iyi nekuti vaishungurudzwa nekurohwa pachikoro ichokwadi, tinorohwa pano,” anodaro mwana uyu.
Anoti vana ava vaibva kudzimba dzavo, vonoswera mumapako ari mugomo iri vachizodzokera kudzimba zuva radoka apo vabereki vaisaziva kuti vainge vasingasvike kuchikoro.
Vana ava vanonzi vakasarudza vatungamiriri vavo pamwe nemakurukota “echihurumende” chavo chemusango umu.
“Akaitwa president ndi***, mutevedzeri wake ari *** (mazita avo vose tinawo) – vose vari Grade 7 uye vari vemhuri imwe chete. Vanga vaine makurokota avo uye vanonzi vaiswera vachironga zvavaida kuzoita pachikoro senzira yekuranga vadzidzisi vavo nevamwe vana vairamba zvavaida,” anodaro mwana uyu.
Vamwe vana vanonzi vange vagadzwa muhutungamiriri vanosanganisira vamwe vaviri veGrade 6 nevaviri veGrade 7.
“Vana ava vakazoonekwa nemumwe murume aivhima mugomo umu, uyo akavabvunza kuti vaiitei musango asi vakatanga kupopotedzana naye izvo zvakaita kuti anomhan’ara nyaya iyi kumukuru wechikoro chedu, VaNgoni Pamire nemutevedzeri wavo VaSarathiel Muchapondwa. Apa ndipo pakazorongwa kuti vana ava vanganobatwa sei musango umu,” anodaro.
Vadzidzisi vepachikoro apa vanonzi vakazokwira mugomo iri ndokunowana vana ava vari pakati pemusangano vagere pasi pemiti apo vanonzi vaipanana mikana yekutaura.
“Maticha akasvikobvunza vana ava mararamiro avanoita musango vachivatora mavhidhiyo nenharembozha dzavo, aripo pachikoro mavhidhiyo iwaya. Vana ava vakati vanotiza kurohwa pachikoro uye vamwe vavo vakazorangwa pa’assembly’ — takatarisa nemusi weMonday wa rika,” anodaro mwana wekuramba kupi muchikwata ichi uyu.
Vabereki vane vana vange vachig mugomo ava vanonzi vakashevedzw kwakangouya mubereki mumwe chet
“Mubereki akauya chete ndiMai *** tinaro) vemubhuku raMatanda uye v mwana wavo aiva muchikwata chevai musango,” anodaro.
Mukuru wezvedzidzo mudunhu re shonaland Central — Provincial Educa Director (PED) — avo vakangozviti van VaMudiwa vanoti nyaya yekuti vana v Muchapondwa Primary School vai
Chikoro cheMuchapondwa Primary
Gomo reMahori rinonzi raihwanda vana vechikoro Kamangira Mifananidzo naTa